2 - 4 Septemba 2020Shanghai, China! Nnọọ na Cinte Techtextil China!
site na nhazi na 20-08-17
Cinte Techtextil China bu ahia izizi nke ahia ahia na nke adighi adighi ahia na Esia ma buru uzo abuo nye nwanne ya nke Techtextil na Germany uwa dum.
Kedu ihe kpatara anyị jiri jiri obi anyị niile mata akwụkwọ ịkpọ oku?
site na nhazi na 20-08-08
Kedu ihe kpatara anyị jiri jiri obi anyị niile mata akwụkwọ ịkpọ oku? Amaghị m ma ọ bụrụ n’icheta na mgbe ị na-ede akwụkwọ ịkpọ oku na ụlọ akwụkwọ elementrị, ụlọ akwụkwọ ga-akwadebe otu onye nwere obere mmụọ. Kedu ihe ị jiri jiri ụrụ nkuzi mee ihe? Taa, ndị nrụpụta nwere mmetụta ga-abịa ịgwa gị…
Llsmụaka mkpịsị aka a na-eji akwa a na-ejighi akwa mee bụ ihe nzuzu maka ụmụaka!
Ndewo onye ọ bụla! Ndi nke nwere umu n’ulo, o nwere omume ikuru umu gi akuko n’abali? Ma ọ bụ gị na ụmụ gị igwa egwu oge ị ga-eji nọrọ? Inmụaka nọ n’ezinaụlọ anyị nwere nnukwu oge na akụkọ oge niile. Na agbanyeghị etu osi eme ihe ...
Chemical kemịkal chere na anyị kwesịrị ị attentiona ntị na ihe dị mkpa
Enwere ọtụtụ ebe na eji kemịkalụ kemịkal mee ihe, enwere mmetụta nke ukwuu, n'ọtụtụ ebe etinye aka. Mana n'iji ngwaahịa a anyị kwesịrị ị toa ntị n'okwu ụfọdụ, ka anyị wee jiri ya mee ihe nke ọma. Nnọọ na ndụ anyị bụ ins ...